Kedu ka esi kwalite ngwaahịa Amazon dị ka onye na-ere ahịa?
Ọ dịghị mkpa ịsị na onye ọ bụla na-ere ahịa kwesịrị ịma otú e si hazie ngwaahịa Amazon ka ha wee nọrọ n'elu ọchụchọ ahụ mgbe niile. Echere m na ịnwe ogo dị elu bụ nanị ụzọ ị ga-esi na-adị ndụ n'ebe ahụ, dị ka imelite ọnọdụ gị ugbu a nwere ike nweta ngwaahịa gị n'ihu n'ihu nke ndị na-ege gị ntị n'ebe ahụ. Ya mere, n'okpuru ebe a, m ga-egosi gị otu esi ebuli ngwaahịa Amazon dị ka onye na-ere ere n'ezie. Ka anyi mee ngwa ngwa site na ntughari ndia site na ndu ndu - vendo attrezzi usati palestra.
Olee otú esi akụ Amazon Ngwaahịa
Nzọụkwụ nke otu: Chọpụta Isi Ihe Ntube Gị
Ka anyị lee ya anya - nchịkọta ndepụta nke ngwaahịa gị maka isiokwu na Amazon dị nnọọ iche na nke anyị nwere maka engines engines dị ka Google n'onwe ya. Ọ pụtara na ịchọta isi isiokwu ịchọtara isi ma mepụta ndepụta mbụ maka ha ị ga-achọ iji Google's Keyword Planner tool - first. N'ụzọ dị otú ahụ, ị ​​gaghị emepụta ndepụta nke isiokwu dị iche iche a chọrọ iji rụọ ọrụ na, ma nweta nnukwu foto nke usoro izugbe niile.
Nzọụkwụ nke abụọ: Mezie Ndepụta Ntanye Gị n'ime Nyocha Ikpeazụ
Ozugbo i nwetara ndepụta nke isiokwu gị dị iche iche, oge eruola ka ọ bụrụ ntakịrị mkpumkpu.M na-ekwu na ị ghaghị ịmecha ya n'ime ederede kachasị mkpirikpi nke nwere nanị ihe kachasị mma nke mkparịta ụka na-emeri na-emeri na ogologo oge ngwaahịa ọchụchọ njikọta. N'ụzọ dị otú a, ana m akwado iji otu n'ime nchọpụta isiokwu ndị na-esonụ na aro ndị e mere maka ndị ahịa Amazon. Enwere onwe gị ịnwale onye ọ bụla n'ime ha - tumadi n'ihi na m nwalere ha maka nchịkọta njirimara ngwaahịa m na Amazon. E kwuwerị, ọ bụ naanị gị ka ị ga-ahọrọ nke ị ga - ahọrọ.
Sellics - onye inyeaka ntanetị ga-abụ nke bara uru maka oge mbụ nke isiokwu ọchụchọ gị.Ma mụ onwe m, eji m Sellics n'oge arụmụka nkwenye. Na ihe niile dị nnọọ mfe - ihe niile m chọrọ n'elu na ọ bụ naanị ịbanye a di na nwunye nke m isi lekwasịrị Keywords, ma na-enyere ụfọdụ bara uru Keywords aro na bara uru ndụmọdụ, nke e wetara kpọmkwem site m ezigbo niche / ụdị asọmpi na Amazon.
Sonar - gosipụtara nnọọ uru maka m mgbe m ka na-amaghị otú e si ebuli ngwaahịa na Amazon dị ka pro. Ntinye, nke a na-eme nnyocha nke isiokwu a na-eme ka o kwe omume maka ọ bụla Amazon na-ere iji chọpụta ihe niile bara uru Keywords na ogologo-ọdụ njikọ dị mkpa iji hazie ngwaahịa ha. Dị ka Sellics Keywords toolbar, Sonar chọrọ naanị otu mkpụrụ okwu ọbụla iji mejupụta gị iji nye gị akara ederede kachasị mma, kwadoro ya na ụfọdụ ọnụọgụ weebụ bara uru, dịka nkezi atụmatụ nchịkọta ọchụchọ, usoro dị ugbu a nke ojiji, wdg.